Australia | Otu Di na Nwunye
July 31, 2019 + Australia, Oceania, Tasmania, Nhazi njem
Oge achọrọ ị ga-efu efu ka ihe ngosi Australia nke 4
Ileta Australia bụ ahụmahụ dị ịtụnanya. Omenala bara ụba. Ndị obodo nwere omume enyi. Agwaetiti ndị dị egwu. Osimiri zuru oke. N’ezie, ogologo mmiri dị ogologo nke Australia nke 50,000 dị n’ụlọ nke nwere ọdụ ụgbọ mmiri 10,000 +, n’ebutaghị na ọ bụkwa ụlọ nke ọtụtụ agwaetiti mara mma. Ka a sịkwa ihe mere, ọtụtụ ndị njem si n'akụkụ ụwa niile na-agafe oké osimiri iji hụ ihe mara mma obodo a nwere inye. Ọ bụrụ… GỤKWUO
September 20, 2018 + Australia, Oceania, Outdoors
6 nke kachasi Adventurous Hikes na Australia
Onye edemede Bio: Sam Ross na-agbazi blog thehammockhombre.com - a na-eme njem nlegharị anya na usoro ndụ ntanetị. N'ime afọ 3 gara aga, ọ na-aga na kọntinent ọ bụla, edere ya na ọtụtụ mba, obodo na ebe. Onye ọ bụla nke gara Australia nwere ike ịgba akaebe na ala a mara mma karịa okwu. Ndị hụrụ ezigbo mma n'èzí dị nnọọ n'ụlọ ... GỤKWUO
December 27, 2017 + Arts & Music, Australia, Nri na ihe ọṅụṅụ, Ozi ndị a, Obere-Blog, Oceania
Njem Sydney: Ebe aga, Foods to eat, Stuff To Buy
Cate Palmer bụ onye edemede, onye na-eje ụwa na onye na-ekwu onwe ya "nnukwu geek". E nwere ike ịchọta ubi ya maka ụzọ ndụ, njem na isiokwu metụtara isiokwu. Ọchịchọ ya nwere mmasị na mbara igwe na-agbanwe agbanwe, ọ bụkwa ya bụ onye edemede nke "Njem Sydney: Ebe Ị Ga-aga, Ihe Oriri Ịri, Ihe Ngwụrụ Ịzụta". Iji soro Cate, lelee ya Twitter maka ozi ndị ọzọ. Sydney bụ ... GỤKWUO
November 1, 2017 + Africa, Asia, Australia, Di na Nwunye, Europe, France, Hawaii, Japan, North America, United States
Njem na Romance: 9 Best Helicopter Destinations for Romantic Couples
"Njem na Romance: 9 Best Helicopter Destinations for Romantic Couples" dere Maria Estrada, onye blogger na onye njem. Ọ na-enwe mmasị ide banyere ebe ọ nọ na-ekerịta ahụmahụ ụfọdụ banyere njem ya. N'oge ya n'efu, ọ na-agụ akwụkwọ ma na-ekiri ihe nkiri nkiri ịhụnanya. Maka ọtụtụ ndị di na nwunye, njem bụ akụkụ nke ịhụnanya na-adịghị na ya, karịsịa ma ọ bụrụ na ị họrọ njem ebe ... GỤKWUO
August 31, 2017 + Australia, Ebe nkiri ebe nkiri, Ihe efu, Oceania, Nhazi njem
Ihe efu na-eme na Sydney, Australia
Ya mere, mgbe ọtụtụ afọ na-atụgharị uche njem njem na Australia, na-atụfu ego na mgbalị ọ ga-ada ebe a, ị chọtara onwe gị ụgbọ elu ala ma ugbu a ị nọ ebe a. Ị nwere ike ịbanye n'obodo Australia kachasị ukwuu; Sydney na ị naghị agbanye ọsọ ọsọ na itinye ego karịa karịa. Ihe ukwu banyere Sydney bụ na ... GỤKWUO